သင်၏ LEGO Boost - Ikkaro မှ အကောင်းဆုံးရယူရန် အကြံဥာဏ်များနှင့် အကြံပြုချက်များ
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ကစားစရာအရုပ် >> Lego Boost >> သင်၏ LEGO Boost အတွက် အကြံဥာဏ်များ
Lego Boost နှင့် Scratch
ကုတ်ခြစ်ရာ တိုးချဲ့မှုများကို LEGO Boost၊ LEGO Minsdtorm EV3 နှင့် LEGO WeDo 2.0 အတွက် ရနိုင်ပါသည်။ ရွေးချယ်စရာများထည့်ခြင်း၊ LEGO အာရုံခံကိရိယာများနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန် သီးခြားပိတ်ဆို့အသစ်များ။
ဒါက ကျွန်တော်တို့ကို တစ်ခုလို့ ယူဆတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ro ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွင် အပိုဖြစ်သည်။bots များသည် ကလေးများသည် ၎င်းတို့၏ဖန်တီးမှုများတွင် ဤရိုးရှင်းသောဘာသာစကား၏ အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကို အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Boost Kit ၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် စည်းဝေးပွဲအသစ်များကို ဖန်တီးသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်များ ရှိပါသည်။ တယောက်က bricodelab ဒါကငါတို့ကိုတင်ပြတယ်
ဆိုက်အသစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက ဆောင်းပါးကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါမည်။ သိတာရှိရင် comment ချန်ခဲ့ပေးပါ။
နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာကို မတွေ့ရသေးပါ။ ငါမြင်တယ်။ LEGO Boost အတွက် စုဖွဲ့မှုအသစ်များနှင့် မတူညီသော စာအုပ်များရှိပါသည်။အသစ်အဆန်းများဖြင့် တည်ဆောက်မှုများ၊ အကြံပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာမပြုလုပ်မီ ပြန်လည်သုံးသပ်လိုသည့် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းမှာပြproblemsနာရှိရင် ဘလူးတုသ်ချိတ်ဆက်မှု ၊ ငါမင်းကို အတင်းအကြပ်လုပ်ဖို့အတွက် လှည့်ကွက်တစ်ခု ထားခဲ့တယ်။.
ဟာ့ဒ်ဝဲ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း။
ဤကဏ္ဍသည် အဆင့်မြင့်သည်။ ကလေးများအတွက် ရွေးချယ်စရာများမရှိတော့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကြိုက်တဲ့လူကြီးတွေအတွက်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ပရိုဂရမ်းမင်း၊ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ဟက်ကာကိရိယာများ အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန်နှင့် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အားလုံးကို အသုံးချရန်။
ထို့ကြောင့် pos Powered Up ၏ Bluetooth ၏အသုံးပြုမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ Hub ကိုရွှေ့ပါPython၊ Arudino၊ ESP32၊ Nodejs အတွက် စာကြည့်တိုက်များ။ IoT၊ AI၊ ARduino နှင့် ပေါင်းစည်းမှု၊ Raspberry၊ Alexa စသည်ဖြင့် အသုံးပြုသည်။
Move Hub / Powered Up Hubs တို့နှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန် Python စာကြည့်တိုက်. ၎င်းသည် Move Hub ၏ Bluetooth ကိုအသုံးပြု၍ ပရိုဂရမ်များရေးသားရန်အတွက် Python စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
LEGOINO. ၎င်းသည် ESP32 အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ထားသည့် Arduino စာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပြီး Boost Move Hub ကဲ့သို့သော မတူညီသော LEGO Powered UP စက်ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုသည်။
Lego Boost Browser အပလီကေးရှင်း. ၎င်းသည် သင့်အား မည်သည့်အပလီကေးရှင်းမှ ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ လမ်းကြောင်းပြမှုမှ Lego Boost ကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
MoveHub Async. Move Hub အတွက် အညီအမျှ နည်းလမ်းများ အသုံးပြုခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
Browser တွင် LEGO Boost. browser မှ Boost ကိုထိန်းချုပ်ရန်အခြားပရောဂျက်။
LEGO Boost AI နှင့် Manual ထိန်းချုပ်မှု. Lego Boost အတွက် ရိုးရှင်းသော AI။
LEGO Bluetooth စမ်းသပ်မှုများ. Powered Up နှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန် ပရောဂျက်များ စုစည်းမှု။
IOT AI LEGO Boost Faustina. Boost ကို ထိန်းချုပ်သည့် ဉာဏ်ရည်တုဖြင့် ဖန်တီးထားသော စက်ရုပ်။ ဤသည်မှာ ပေါ်တူဂီဘာသာစကားဖြင့် ပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
LEGO Boost စက်ရုပ်. Alexa နှင့် Raspberry Pi Zero ဖြင့် LEGO Boost နှင့် Amazon AWS အကောင့်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။
NVIDIA Jetson Nano ဖြင့် LEGO Boost. . Bluetooth ကို အသုံးပြု၍ NVIDIA Jetson Nano 2GB သည် LEGO Movehub သို့မဟုတ် LEGO Powered Up hub ကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Node.js အင်တာဖေ့စ်. ၎င်းသည် Node.js ရှိ Move Hub အတွက် အင်တာဖေ့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ပိုမိုသိရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးရန် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
စက်သင်ယူခြင်း၊ နက်ရှိုင်းစွာသင်ယူခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ ...
categories အီလက်ထရွန်းနစ်, ကစားစရာအရုပ်, Lego Boost လက်မှတ်အညွှန်း
1 Lego Boost နှင့် Scratch
4 ဟာ့ဒ်ဝဲ ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း။